Nekufamba kwenguva, chikamu chekurima chinosimudzira chinomutsa mubvunzo wekudiwa kwekushongedza minda nemasisitimu ekudiridza. Musika wemazuva ano unopa huwandu hukuru hwemidziyo yekudiridza. Nzira yekunzwisisa sei assortment iyi uye kusarudza yakanyanya kuvimbika uye inobatsira sarudzo mune yakatarwa mamiriro, tichazotaurira mune ino chinyorwa.
"Amyl". Kukoshesa mbatatisi
AFG National. Kupfuura 1500 ha pasi pemazamu
AgroAlliance-NN: "Avo chete vasingatyi kukwidza machira avo ndivo vanopona mune zvekurima"
Agrotrade makumi maviri! Hwemhando-yakanyorwa bhizinesi
#NORIKA: Pfupiso yemwaka wekutengesa 2019-20 uye zvirongwa zhizha
Potato mapurazi eNizhny Novgorod dunhu
Mbatatisi inokura mudunhu reNizhny Novgorod
Parizvino, madenderedzwa akapamhama-emakona michina ari kudiwa kukuru mumusika weRussia. Ivo vanokwanisa kuvhara kubva pamakumi maviri kusvika mazana maviri mahekita emunda, zvichienderana nehurefu hwekuisirwa. Mukana mukuru we stationary wedenderedzwa masisitimu ndeokuzvitonga kwavo: michina inobudirira kuita mabasa adzo pasina anoshanda maneja.
Kufunga pamusoro peiyo yekudiridza system yeiyo saiti, zvinhu zvakakosha zvakati zvinofanirwa kuverengerwa: saizi yemunda, chimiro chayo, topogopi, uye kuvapo kwezvipingamupinyi (nzvimbo dzesango, tambo dzemagetsi). Kuyamwisa munda wakakura kungangoda akawanda anokusasa. Negadziriro yavo yehunyanzvi, zvinokwanisika kuwana iko kufukidzwa kwe80-85% yenzvimbo yayo yese, inoonekwa seyakanaka mhedzisiro yematanho anotenderera.
Kuisirwa kwecandelo (chikamu chedenderedzwa) kunoita kuti iwe udiridze munda pasina kubata nzvimbo nezvipingamupinyi. Nekudaro, kana muchina wakadaro unofukidza chikamu neakona yepasi peisingasviki madhigirii zana, ipapo kushandiswa kwayo kunova kusabatsira.
Kunyanya kukoshesa kunofanirwa kubhadharwa pakusarudzwa kwemidziyo yekudiridza kweminda ine nzvimbo yakaoma. Shanduko yakakura yekukwira inogona kukonzeresa iyo yekumanikidza pamusoro pe panguva yekushanda. Pamusoro pezvo, zvinofanirwa kutorwa mupfungwa kuti kana uchipfuura nekuisa mumamwe makomo akadzika, kumanikidzwa kuchisipiro kuenda kutsigiro yepakati yemuchina kunowedzera (izvo zvinoreva kuti mapaipi chete ane hukobvu hwemadziro anofanirwa kushandiswa pane yekutanga ndege yekuisa), uye yakakura misiyano, iyo "yakanyanya" mapaipi achadikanwa pakuvaka. Izvo zvichakanganisawo nzvimbo yekupombi uye pombi yepurasitiki, mutengo weti yese yezvishandiso unowedzera nenzira imwechete.
Kutaira muchina wedenderedzwa, zvinodikanwa kugadzirira zvigadziro: isa pombi yepurasitiki, dururira chigaro chekongiri pasi peiyo yepiramidhi yepakati yekusasa, sarudza chiteshi chepombi uye uone kunobva magetsi.
Kana magetsi akabatana kumunda, pombi yemagetsi yekupomba inogona kuiswa. Kana zvisiri, imwe mhinduro ingangove yekuisa dizeli jenareta uye pombi station.
Nekudaro, zvese izvi zvinoshanda kumapurazi ari kuunza matekiniki ekudiridza matunhu padunhu ravo kekutanga. Asi pane kazhinji zviitiko apo bhizinesi parinogadzirisa nyaya yekutsiva iripo (kazhinji kubva kunguva yeUSSR) masisitimu nemamwe azvino uno. Kugadziridza maitiro nenzira yomuzvarirwo kunodhura zvishoma, sezvo bhizinesi riine zvivakwa kubva pakaiswa yekare: pombi nenzvimbo yekupomha zvinochengetedzwa.
Panguva imwecheteyo, kunaka kwebasa rechinyakare uye zvishandiso zvitsva zvinenge zvisingaenzanisike. Motokari dzemazuvano dzinovhara dzinenge nharaunda yese yemunda. Basa rekudiridza nzvimbo dzisingawanikwe zvakanyanya inoitwa neane simba terminal mvura cannons. Iyi michina mitsva yekudiridza yakarongedzwa nehuwandu hwakawanda hwemabhandi easasa akakodzera kudiridza kwezvirimwa zvakasiyana. Kuti uite basa rakawandisa, iyo inodurura inosvina inogona kuve neanyowa yemanyowa application system, nzvimbo yemamiriro ekunze ine ivhu nyoro sensors.
Drum sprinkler michina. Ndima Diki Solutions
Muminda umo zvisingakwanisike kuwana yakakura-makona michina (sekutonga, idzi inzvimbo diki ine nzvimbo yemakumi maviri kusvika makumi mashanu mahekita), tinokurudzira kuisa madhiramu-mhando yekudiridza makina.
Imwe yemiti yakadaro inodiridza mahekita 25-30. Nheyo yekushanda kwayo yakapusa: chekutanga, nerubatsiro rwekondakita, iyo coil haina kusununguka, pombi station inotangwa, uye coil inotanga kuiswa pakarepo (nekuda kwemvura inoyerera kuburikidza neye turbine yakamanikidzwa kubva pombi chiteshi). Munguva yekudonha kwehose, kudiridza zvakare kunoitika. Dhizaini yakadai yakaedzwa pamusoro pemakumi emakore ekushanda kutenderera pasirese uye inosangana nemabasa ayo zvakanyanya sezvinobvira.
Zvakanakisa zvisinga bvumike zvemadhiramu-mhando michina zvinosanganisira yavo mutengo (achienzaniswa nehupamhi-kubatwa), pamwe nekufamba uye kusununguka kwekuisa (izvo zvinokubvumidza iwe kuti uzvifambe nekukurumidza kubva pane imwe shamba kuenda kune imwe).
Asi iyo "coil" ine mishina yavo. Kutanga, vanhu vangangosvika vaviri kana vatatu vanofanirwa kudzora mashandiro emuchina wedhiramu-rudzi. Iyo yekumhanyisa yekudiridza yemushini wekuwachisa-mhando wedhiramu kana ichienzaniswa nemashini akapamhika-grip zvakare inosiya zvakawanda zvichidikanwa: kudiridza munda wakajairwa mahekita makumi matatu mukukura uchatora muchina wacho kungangoita mazuva gumi. Panguva imwecheteyo, mhando yekudiridza ichave isinga tsanangurike, sezvo zvakanyanya kuomarara kuenzana kwekuwanikwa kwemvura, zvinoreva kuti zvidyarwa mune dzimwe nzvimbo dzesango hazvigamuchire huwandu hunodiwa hwekunyorova.
Kutaurisa michina yedhiramu-mhando, zvichave zvakafanira kuisa pombi yemapurasitiki, asi pachinzvimbo chekongiri, makombi achafanirwa kubatanidza "coil" pombi. Kuwanda kwemagetsi kunobva pakugadziriswa kwemunda, paavhareji, vanoiswa mamita makumi mashanu nemumwe (kana "coil" yacho ichishandiswa pamwe necomputer) kana makumi matanhatu emamita (kana iyo "coil" isina console). Magetsi kana dizitsi pombi zvikamu zvinogona kushandiswa kusimudza muchina nemvura.
Panzvimbo peipi yepurasitiki, tinokurudzira vatengi vedu kushandisa anokurumidza-akaungana aluminium. Nekuda kwekugadzirwa kwayo, inogona kusasangana nyore uye kuendeswa kumatunhu matsva kana zvichidikanwa.
Mukupedzisa, ndinoda kusimbisa kuti yega yega mhando dzakaratidzwa michina inoshanda mune mamwe mamiriro, ine zvarinobatsira nezvakanaka uye iri mukubatsira kwakanaka mumusika. Uye iyo nyanzvi dzinogara dzichikubatsira iwe nesarudzo.
Boka remakambani "Agrotrade"
Tags: 2020 Nha. 2chigubhu mhando vanosasakutenderera kuiswa kwakatendererakudiridza
Russia yakawedzera kupinza anyanisi
GC "Dmitrov miriwo": kosi pane automation
Kiremko: Yakatanga Mbatata Kugadziridza Midziyo
Ukraine inoronga kutora yakanaka mbatata chirimwa
Kuongorora kwemusika kwe starch uye starch zvigadzirwa. Mamiriro ezvinhu kumashure kwekoronavirus
Open Shamba Mwedzi #DOKAGENE